Забур 54 CARS - Nnwom 54 AKCB
Dawid “maskil” dwom. Ɔtoo no bere a Sififo kɔka kyerɛɛ Saulo se, “Dawid abehintaw wɔ yɛn mu.”
1Ao, Onyankopɔn, gye me wɔ wo din mu;
fa wo tumi bu me bem.
2Ao, Onyankopɔn, tie me mpaebɔ;
tie mʼanom nsɛm.
3Ahɔho retow ahyɛ me so.
Atirimɔdenfo rehwehwɛ me akum me;
nnipa a wɔmmfa Onyankopɔn nyɛ hwee.
4Ampa ara, Onyankopɔn ne me boafo;
Awurade ne me hwɛfo.
5Ma mmusu nkyim mmra wɔn a wodi me ho nseku no so;
wo nokwaredi mu, sɛe wɔn.
6Mefi me pɛ mu abɔ afɔre ama wo;
Awurade, meyi wo din ayɛ,
7Woagye me afi me haw nyinaa mu,
na mʼani ahu nkonimdi wɔ mʼatamfo so.
AKCB : Nnwom 54